Toni Kroos oo fariin qiiro leh ku macsalaameeyay macalinkii hore kooxda Real Madrid Julen Lopetegui – Gool FM
(Real Madrid) 31 Okt 2018. Xidiga khadka dhexe reer Germany ee kooxda Real Madrid Toni Kroos ayaa wuxuu fariin qiiro leh ugu diray baraha bulshada macalinkiisii hore ee Julen Lopetegui.
Kooxda Real Madrid ayaa si rasmi ah u xaqiijisay inay shaqada ka Ceyrisay tababare Julen Lopetegui iyadoona si ku meel gaar ah xilka kooxda loogu sii dhiibay Santiago Solari.
Maamulka kooxda Real Madrid ayaa waxay qorsheenayeen in Antonio Conte ay ka dhigtaan badalka Julen Lopetegui, laakiin wada hadalada labada dhinac ayaa waxay kusoo idlaadeen si fashilan, sababa la xriira dhowr arimood ay labada dhinac isku mari waayeen.
Ugu dambeyntii madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentio Perez ayaa ku qasbanaaday inuu si ku meel gaar ah u magacaabo Santiago Solari, inta uu ka helayo macalin awood u leh inuu leeliyo Los Blancos.
Toni Kroos ayaa kadib ceyrintii tababare Julen Lopetegui u diray fariin qiiro leh wuxuuna yiri:
“Guuldarada ugu weyn ee ciyaartoyda waa markii tababaraha lagu qasbo inuu baxo, gaar ahaan xaaladan oo kale, sababtoo ah wuxuu ahaa macalin weyn, isla markaana leh shaqsiyad xoogan, Mahadsanid Julen Lopetegui”.
Naby Keita oo ka hadlay sirta ka dambeysa awooda ciyaareed ee Mohamed Salah